Marqaati ICC oo la dilay - BBC Somali
Marqaati ICC oo la dilay
Image caption Maxkamadda ICC
Qoyska nin Kenyan ah oo inta la dilay meydkiisa lagu riday webi, ayaa sheegaya in uu u ahaa marqaati muhiim ah kiis ka dhan ah masuul sare oo ka tirsan dowladda Kenya, kaas oo ay dacwad uga socoto maxkamadda dembiyada caalamiga ah.
Qaraabada ninkan la dilay oo lagu magacaabo, Meshack Yebei, ayaa sheegaya in la waayay Axadii la soo dhaafay, kaddibna meydkiisa laga helay goob meydadka lagu keydiyo.
Qoyska Meshack Yebei, ayaa sheegaya in uu u safri rabay magaalada Hague, si uu ugu marqaati furo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto, iyo weriye Joshua Sang.
Balse waxa la waayay maalmihii ugu dambeeyay bishii la soo dhaafay, kaddib markii uu biyo u doonay gabar uu dhalay oo cisbitaal ku jirtay.
Booliska deegaanka Nandi ee ka tirsan gobalka Rift Valley, ayaa sheegaya in markii dambe meydkiisa laga helay webi halkaa mara, isaga oo dhaawac ka qaba madaxa.
Sarkaal maxkamadda ICC u jooga dalka Kenya, oo lagu magacaabo Mabinty Kamara, ayaa BBC-da u sheegtay in maxkamadda aysan war rasmi ah ka haynin geerida ninkaasi.
Maxkamadda ICC-da ayaa horay u sheegtay in kiisaska Kenya ay dhibaato ku yihiin marqaatiyo go'aankooda la badalay, loo hanjabay ama la waayay.
Bishii la soo dhaafay, dacwad ooga maxkamadda ayaa dib ula laabtay eedeymo ka dhan ahaa madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, kaddib markii la waayay cadeyn ku filan ayna iskaashi ka waayeen dowladda Kenya.